Commentary Archives - Page4of 15 - Guna Raj LuitelGuna Raj Luitel
‘छेपाराको कथा’0ON: August 21, 2014
बाल्यकालमा हजुरआमाले सुनाउने गरेको ‘छेपाराको कथा’ प्रत्येक वर्षको बाढीपहिरोपछि सम्झना हुनेगर्छ। हरेक वर्ष बाढी आउँछ। निर्दोष मानिस त्यसमा पर्छन्, मारिन्छन् र विस्थापित हुन्छन्। हजुरआमाको त्यो कथा प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ। कथासार यस्तो छ : हिउँदका दिन असाध्यै चिसा हुन्छन्। छेपारोलाई निकै चिसो हुन्छ।… बृस्तृत…
आखिर चरी हाम्रा को हुन्?0ON: August 13, 2014
समय गाईजात्राको छ। सन्दर्भ चर्चा थालौँ कवि लक्ष्मण गाम्नागेको कविताबाट। यो कविता गाईजात्राभन्दा धेरै अघि उनले ओसो तपोवनमा सुनाएका थिए। गाईजात्रा पर्व आएर पनि गयो तर, देशमा गाईजात्रा जारी छ। ‘दुग्ध विकास संस्थानले वितरण गरेको दूध दश मिनेट उमालेर पिउनुहोस् खानेपानी संस्थानले… बृस्तृत…
किन मोदी फरक हुन्? 1 ON: August 6, 2014
‘म पक्का अहमदावादी हुँ। हाम्रो विशेषता भनेको हामीले सबैभन्दा कम खर्च कसलाई गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु हो। हामी एकतर्फी भाडा तिरेर दोहोरो यात्रा गर्नुमा विश्वास गर्छौं। हामी कसैलाई पनि सजिलै पैसा दिँदैनौं।’ चर्चित भारतीय पत्रकार रजत शर्मासँग इन्डिया टिभीको ‘आपके अदालत’ मा… बृस्तृत…
नेपालमा ‘हिट’ हुने मोदी सूत्र0ON: August 4, 2014
पैतालिस मिनेटमा पाँच पटक भने– नेपाल बुद्धभूमि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूटानी संसदलाई सम्बोधन गर्दा जिब्रो चिप्लिएर नेपालको नाम लिँदा सामाजिक सञ्जालमा उनको खिल्ली उडाइयो। संविधानसभा भवनमा उनले आइतबार गरेको सम्वोधनले नेपालसम्बन्धी उनको जानकारी यति रहेछ कि भूटानी संसदमा पनि त्यसको सम्झना… बृस्तृत…
जनकपुर हत्याका अनुत्तरित प्रश्न0ON: July 30, 2014
जनकपुरमा मारिएका पाँच युवाका शवोत्खनन्पछि प्राप्त कंकाल परिवारलाई बुझाएको साउन ७ गतेको दिन बिहानैदेखि पानी परिरहेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको दिन पनि त्यसैगरी पानी परिरहेको सम्झना गरेका थिए। त्यो मौसमको मात्र होइन यस घटनासँग सरोकार राख्नेहरूले त्यसपछिका यावत् घटना सम्भि्करहेका… बृस्तृत…